संशोधन विधेयकमाथिको मतदानले मधेशका शत्रु पहिचान भयो – राजिव झा
महासचिव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
० संविधान संशोधन विधेयक संसदमा असफल भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
— खासमा संशोधन विधेयक इमान्दारीपूर्वक ल्याइएको प्रस्ताव थिएन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले रणनीतिक रूपमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई कमजोर बनाउन उद्देश्उले विधेयक ल्याएको र जानीजानी असफल गरेको हो । उनीहरूको पछिल्लो क्रियाकलापबाट हामीलाई यस्तै आभाष भएको छ । विधेयकमाथि मतदानबाट एउटा फाइदा पनि के भएको छ भने संविधान जारी गर्दा यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट र ९० प्रतिशतले ल्याएको संविधान भन्नेहरूलाई कडा जवाफ दिएको छ । यो संविधानले देशका सबै समुदायको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । विधेयकमाथि भएको मतदानमा ६६ प्रतिशत सांसद्ले पक्षमा मतदान गरेका छन । यसको मतलब ६६ प्रतिशत सांसद्ले संविधान अपुरो र अपूर्ण छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेका छन जुन हाम्रो सैद्धान्तिक जीत हो । विधेयकमाथिको मतदानले को स्थायी शत्रु, को संविधान संशोधनको विपक्षमा छन् भन्ने कुरा जनताले थाहा पाएका छन् ।
० विगतमा तपाईंहरूले विधेयक पारित नै हुुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको थियो । तर, पछिल्लो समय यो पास वा फेल जे भए पनि प्रक्रियामा लैजानु पर्ने भनेर लचक हुनुभयो ? यस पछाडिको कारण हो ?
— हामीले पारित हुनुपर्छ भनेर नै भन्दै आएका थियौं र अहिले पनि संशोधन हुनु पर्छ पनि भन्दै छौं । संविधान संशोधन प्रस्तावमा मतदान हुने दिनसम्म पनि हामीले पारित हुनुपर्छ नै भनेका थियौं । विधेयक पारित हुनका लागि गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो अडान कामयै थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसले पनि धोका दिएको छ । उसका केही सांसद् अनुपस्थित रहे । एमाले त पहिलेदेखि नै मधेशी जनताको विपक्षमा थियो । त्यस्तै, आफैंले ल्याएको प्रस्ताव कमल थापाहरूले पनि अस्वीकार गरेका छन् । प्रस्तावमा कमल थापाको पनि हस्ताक्षर छ । यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू विपक्षमा जानुभयो । उहाँहरूलाई मधेश र मधेशी जनता चाहिएन ।
० वितगमा पारित हुने अवस्था नभएर विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थिएन । तर, यसपटक सरकारले यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नमा राजपाले सघाएको देखियो । किनभने राजपाले विधेयक पास वा फेल जे भए पनि प्रक्रियामा लैजानु प¥यो भनेर भन्न थालेका थिए नि ?
— नेकपा एमालेको एउटा के आरोप थियो भने संविधान संशोधनको नाममा सरकारले नौटंकी गरिरहेको छ । विधेयकलाई लिएर सबैले एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोमा उत्रिएको अवस्थामा थियो । त्यसैले कित्ताकाट गर्नु पनि आवश्यक थियो । अब त छर्लङ भयो ।
० सत्ता पक्ष नै संविधान संशोधनको बाधक हो भन्ने विपक्षीको आरोपलाई निराधार सावित गर्न मतदान गरिएको हो त ?
— होइन, त्यस्तो कुरा होइन । नेपाली कांग्रेसमा केही सांसद् संविधान संशोधनको पक्षमा थिए । विपक्षीले पनि हामीहरूमाथि आरोप लगाइरहेका थिए । नेपाली कांग्रेस पनि मधेशको सवालमा त्यस्तै शत्रु हो । संविधान संशोधन विधेयक असफल भएका बेला प्रधानमन्त्री देउवाको अनुहार हेर्नुस् । अनुहारमा कतिको चमक देखिएको थियो । संविधान संशोधन असफल पार्नुपर्छ भन्ने पहिले देखि कै योजना थियो ।
० तपाईंले भने झैं मतदान पछि स्वयम् प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा चमक देखिएको थियो । त्यसो भए संशोधनको पक्षमा को थिए÷थिएनन् भन्ने कुरा मतदानले पनि छुट्याउन सकेन, होइन ?
— हामीले के आशा गरेका थियौं भने कमसेकम ठूला दलका मधेशी सांसद्हरूले पक्षमा विधेयकको पक्षमा मतदान गर्छन् । एमालेका सांसदहरू शत्रुधन महतो, रघुवीर महासेठलगायत जसको शरीरमा यही मधेशको रगत बगिरहेको छ, उनीहरू पक्षमा मतदान गर्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । उनीहरूले पार्टीको निर्णयले क्रस गरेर पक्षमा मतदान गर्छन् भनेर हामीले सोचेका थियौं । उनीहरूले आफ्नो आत्माको आवाज, मधेशी जनताको आवाज सुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । मधेशबाट जितेका सांसद्हरूले मधेशी जनताको पक्षमा मतदान गर्छन् त्यसैले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न हामीले भनेका थियौं । तर, त्यस्तो भएन । तिनीहरूले पनि धोका दिए । को मधेशको पक्षमा छन्, को छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।
० तर, एमालेका कोही पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने भनेर भनेका थिएनन् नि ?
— ठिक छ । हामीहरू जुन भ्रममा थियौं, त्यो टुट्यो । संविधान संशोधन मात्र राजपाका लागि मात्र होइन । सम्पूर्ण मधेशी जनताका लागि संविधान संशोधन हो । मधेशी जनताले अधिकार पाउनुपर्छ । जसले मधेशीका मत पाएर सांसद् बनेका छन्, ती सबैका लागि संशोधन आवश्यक थियो । एमालेका मधेशी सांसद्हरूको सन्ततिका लागि पनि संशोधन आवश्यक थियो । तर उनीहरूले आफ्नो सन्ततिका भविष्यमाथि बञ्चरो चलाएका छन् ।
० तपाईंहरूले पछिल्लो समय विधेयक पास वा फेल जे भए पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुप¥यो भन्न थाल्नुभएको थियो । तपाईंहरूको यस्तो लचिलोपनालाई राजपा चुनावमा जान खोजेको त होइन भनेर पनि भन्न थालिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
— चुनावमा जाने÷नजाने विषयमा अहिले निर्णय भइसकेको छैन् । पदाधिकारी बैठक र मधेशी जनताको आदेशबमोजिम हामी हिंड्छौं ।
० तर, तपाईंहरूले चुनावमा जाने भनेर भनि पनि सक्नुभएको छ नि ?
— होइन । यो आधिकारिक कुरा होइन । कसैले के ीभनेका छन् भने त्यो व्यक्तिगत विचार होला । यस विषयमा पार्टीले छिट्टैे आधिकारिक निर्णय गर्छ ।
० चुनावमा जाने निर्णय भयो भने फोरम नेपालकै कित्तामा राजपा गयो भन्ने कुुरा उठ्ने सम्भावना पनि त छ नि ?
— यो त सम्भव नै छैन । हामीलाई फोरम नेपालको कित्तामा राख्न सकिँदैन । हाम्रो स्थायी दुश्मन एमाले, राप्रपालगायतका दल हुन् । हामीले अडान राखेकै कारण धेरै माग सम्बोधन भइसकेका छन् । शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति, २०६३ देखि अहिलेसम्मको आन्दोलनका सिकिस्त घाइते भएकालाई आजीवन साढे १२ हजार रूपैयाँ मासिक पाउनेछन्, त्यस्तै साढे १० लाख रूपैयाँ प्रत्येकले नगद पाउनेछन् । यी सबै कुरा हाम्रो अडानले पूरा भएका हुन् ।
० त्यसो भएर राजपा अब चुनावमा गयो भने पनि फोरम नेपाल जतिको आलोचना खेप्नुपर्दैन ?
— हो । हामीले तीनबुँदेमध्ये संविधान संशोधनबाहेक करिब करिब सबै माग पूरा गराउन सफल भएका छौं । अब यदि चुनावमा राजपा सहभागी भयो भने मधेशी जनताको अभिमत पाउनेछ । अब अहिलेको संसद्बाट संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । अबको चुनावमा राजपालाई मधेशी जनताले अभिमतबाट संविधान संशोधन गराउन सक्ने संख्या दिनेमा म विश्वस्त छु । अब फेरि पनि मधेशका स्थायी दुश्मनले मत पाए भने समस्या यथास्थितिमै रहने छन् ।
० तपाईंहरूले संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिनेलगायतका कुरा भन्दै आउनुभएको थियो । पछिल्लो समय किन यू टर्न ?
— हामी यू टर्न भएका होइनौं । हामी जनताको आदेश बमोजिम हिंड्ने हो ।
० प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप सुधारमा यो भ्रमण कस्तो रहला ?
— नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ छ । नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अटुट छ । यो सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ । सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण फलदायी हुने विश्वास लिएका छौं । दुई पक्षीय हितका निर्णयहरू गर्नुपर्छ । मेरो एउटा सल्लाह पनि छ । जसरी भारतमा जगन्ननाथ धाम, वैष्णोदेवी, हरिद्वारलगायतको आम्दानीबाट त्यहाँको प्रदेश चलिरहेको छ । त्यस्तै, जनकपुरलाई पनि पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्न, जानकी मन्दिरलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्छ । त्यस्तै, जानकी मन्दिर र हरिद्वार जोड्ने बाटोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्तै, अयोध्यासँगको बाटो पनि निर्माण गर्नुपर्छ । यी विषयमा भारतको सहयोग आवश्यक रहेको हुँदा यसमा प्रधानमन्त्रीले पहल कमदी गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ साल भदौ ९ गते शुक्रबार